Ogaden News Agency (ONA) – Maxay Tahay Sababta Loo Keenay Jigjiga Boqolaal Odayaashii Degmooyinka ah – Noora Afgaab
Maxay Tahay Sababta Loo Keenay Jigjiga Boqolaal Odayaashii Degmooyinka ah – Noora Afgaab
Posted by ONA Admin	/ June 19, 2014
Cabdi iley ayaa degmooyinka ugu yeedhay ugu yaraan 900 oo odayaal ah. Degmooyinka qaar ayaa looga yeedhay 15 oday halka qaana looga yeedhay 10. Inkasta oy shaqada Cabdi iley ay ugu badan tahay shirar odayaal loogu yeedho, xaflad iyo baadhiyo (party) isdaba joog ah hadana dadka ayaa isweeydinaya sababta uu wakhtigan ugu yeedhay odayaashan oo bilka hor ay marsoo baxday in loo yeedhay laakiiin hadana dib dhacay ayeey dadku waxaay leeyihiin waxaa loogu yeedhay dhawr arimood midkood;
1. In gabaad loogaga dhigto ansixinta sidii loo meel marin lahaa dhulka Soomalida ee larabo in laga raro dhamaan wada hareeraheeda oo dhan, waa wada Jabouti ilaa Addis abab isku xidhee oo la rabo in dhinaca walba 50 killo miter laga fogaado. Dhulkan Soomalida laga kicinayo ayaa lagu qiyaasay 450 killometer. Hadaba waxaa loo maleynayaa in uu Cabdi iley doonayo inuu u ekeysiiyo arintaa mid laga tashaday oo odayaasha degaanka uu kala tashaday taasoo u dhib yareyneysa in uu saxeexo.
2. Inay halkaas ugu soo jeediyaan amaan iyo fariin ka badbadin ah oo kusocota dawlada federalka ah oo dhahaysa in ninkan loo daayo jagada, iyadoo la odhanayo wuxuu wax kaqabtay nabada iyo horumarka, wuxuuna qabtay waxaan horay loo arag sidoo kale inay odayaashu sheegaan in aay nabadgalyo buuxdaa kajirto meelihii ay ka yimaadeen laakiin hada loo baahan yahay dhaqdhaqaaqa Alshabaab oo kaliya in wax laga qabto taas oo ah softwords-ka uu isticmaalo Cabdi iley marka uu diidan yahay jirataan ONLF.
3. Inwax kale oon lafileynin uu kasoo baxona waa dhici kartaa maadma oyna hada Cabdi iley iyo Itobiya isu calool fayoobeyn. Si kasta ooy noqotaba waxaa lahubaa in uu u adeegsanayo borobogaandho (multipurpose) Ujeedo Badan ah oo dhinacyo badan taabankarto.
Cabdi iley ayaa baryahan danbe wuxuu bilaabay in uu odayaasha lacag siiyo una gado go’yaal shaal ah, macawiso iyo bakoorado kadibna ay afkiisa ku hadlaan oo ay –Haa- yidhaahdaan xitaa hadii uu yidhaahdobaricadceeda dhinaca kale ayaan kasoo bixi doontaa sowmahaa. Cabdi iley ayaa xiligan oo kale wuxuu u balan qaada odayaasha in uu kabinayo Xajka maadma oo uu garanayo in dadka aynigaas noqdaan markanoo kale kuwo aad u daneyanya tagida xajka.